DUMARKA: Shantaan Waxyaabood Sameey Gabaryahay si Guurkaaga U Guuleysto - Aayaha
Ma garanayo haddii aad la socotid, balse maalin walbo waxaa bur bura guur farabadan ma jiro qof ka fikiro waxa loogu yeero halbeegga guurka.
Guurka waa sidii ubixii oo kale wuxuuna u baahanyahay soo saarid iyo kobcin si loo ilaaliyo noloshiisa iyo caafimaadkiisa marka bal qaado talooyinkaan soo socdo si aad u ilaalisid guurkaaga.
1- Kalgacayl u muuji gacaliyahaaga
Qofna ma guursado qof uusan jecleyn sidaa darteed jacaylkaas waa inuusan joogsan ama uusan isbedelin xittaa guurka kadib, haddii ay wax isbedelayaan waa inuu xoogeystaa oo jacaylka sidii hore kasii fiicnaadaa, haddii seygaaga uu kaa dhigo xaaska labaad markaas cabir dareenkiisa dhankaaga soo jiro, u bandhig maxaa yeelay inaad aamusnaatid waxay saameyneysaa dareenkiisa iyo waxaad ka aaminsantahay, guur indheergaradnimadan leh ma dumo.
Fahan oo kaalintaada ciyaar
Marka laga soot ago jacaylka seygaaga, mas’uuliyadda kale waa inaad u muujisaa kalgacaylka aad u muujiso caruurtaada, waa inay isku mid kuu noqdaan isaga iyo caruurtaad si wadajir ah u jeclaaw, taageer, ogoow dhibkooda sidaa darteed si wanaagsan ayaad u caawin kartaa.
Seygaaga makaa filaayo inaad mas’uuliyaddiisa iyo xaqqiisa kasoo bixi weysid maadaama ay tahay mas’uuliyad ku saran.
Iska ilaali muranka micna darrada ah
Ninkaaga mar kasta maku dhaqaaqi karo go’aano sax ah, balse iyadoo ay taasi jirto ayaad muran kakeeneysaa, maxaadan iskaga ilaali Karin qaladka iyo muranka qaabka daran? Dooda micna darrada ah waxay keeni kartaa fal celin aan wanaagsaneyn ama diidmo ah marka waxaa lagaaga baahanyahay inaad noqotid lamaan wanaagsan ma ahan inaad noqotid qof kasoo horjeeda oo la tirsato.
Mar walba maskaxda ku haay jiritaanka Masayrka
Maseyrka ayaa kamid ah duufaanada guryaha saameeya, qaar kamid ah waa mid dabiici ah oo jacaylka muujiya, balse haddii aanan laga fiirsan keei kara waxyaabo aanan sax ahayn iyo neceybna ku keeni kara guurka wuxuuna maskaxdaada ku keenaa aanan loo baahneyn, ha shaki galin jacaylka seygaaga illaa inaad ku heysid caddeyn ma ahane, is aaminka ayaa wax walba ugu muhiimsan.
Wixii alle uusan raali ka yahay ayaa guleysta ma jiro guri guuleysta oo aanan ahayn kan lagu dhiso Alle dartii (SWT) waa inaad Ilaaheey mar kasta garab weydiisataa, adigana qaabka ugu fiican aadku maamushaa hoygaaga.